English for Hotel and Catering Industry (Unit 8 - Instructions) - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on November 11, 2012 at 16:55 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ instruction ညွှန်ကြားချက်တွေပေးပုံ၊ အစီအစဉ်အဆင့်ဆင့်ကိုရှင်းပြပုံ နဲ့ ဘားရဲ့အချင်အတွယ်အခေါ်အဝေါ်တွေကိုလေ့လာကြပါမယ်။ အလုပ်ထဲမှာ ကိုယ်တိုင်ကညွှန်ကြားရသလို သူများညွှန်ကြားတာ ကိုလည်းလိုက်နာရတော့ လုပ်ငန်းခွင်အဆင်ပြေရေးအတွက် အရေးကြီးပါတယ်။
Unit 8 Instructions
A: How do you makeaMargarita?
B: First, takeacocktail shaker and fill it with crushed ice.
A: I see, what’s next?
B: Next, pour in one measure of tequila.
Then pour inaquarter measure of triple sec.
B: Then squeeze some fresh lemon juice into the shaker.
B: Then addadash of lime juice. Shake well to mix and chill the liquids.
B: Then put some ice cubes intoasalt-rimmed glass.
Finally, pour the Margirita into the glass and serve.
A: What about garnish?
B: Oh, yes, garnish withaslice of lime.
ဒါကတော့မာဂါရီတာ cocktail လုပ်ပုံလုပ်နည်းပါပဲ။ မာဂါရီတာဆိုတာ မက်ဆီကိုဒေသရဲ့နာမည်ကျော် တကီလာနဲ့ရောစပ်ဖျော်ထားတဲ့ classic cocktail ပါပဲ။ မျက်စေ့ထဲမှာ ဖန်ခွက်ပက်ပက်လေးနှုတ်ခမ်းမှာ ဆားလေးတွေနဲ့ သံပုရာသီးစိတ်ကလေးတစ်စိတ်စိုက်ထားတဲ့ ခွက်ကလေးမြင်ကြည့်လိုက်ပါဦး။
လေ့လာထားရမည့် expressions များ
First, takeacocktail shaker. ပထမဦးစွာ ကောက်တေးလှုပ်တဲ့ဘူးကိုယူပါ။
Cocktail shaker ဆိုတာ ကော်ဖီဘူးလိုရှည်ရှည်မျောမျောနဲ့သတ္တုဘူးကလေးဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ထည်ကို အမည်အမျိုးအစား ingredients တွေထည့်ပြီးလက်နဲ့လှုပ်ရမ်းမွှေပေးရတာမျိုးပါ။
Fill it with crushed ice. အတုံးသေးသေးလေးတွေဖြစ်အောင်ခွဲထားတဲ့ရေခဲနဲ့ဖြည့်ပါ။
Next, pour in one measure of tequila. တကီလာအရက် ၁ ပက်ထည့်ပါ။
Then addadash of lime juice. အဲဒီနောက် သံပုရာရည်နည်းနည်းထည့်ပါ။
a pinch of salt နဲ့adash of lemon ဆိုတဲ့အသုံးတွေဟာ ပမာဏနည်းနည်းကိုပြောတာပါ။ တစ်တို့၊ တစ်ညို၊ တစ်ပေါက်၊ တစ်ဆုပ် စသည်ဖြင့်သုံးသလိုပါပဲ။ website တစ်ခုမှာရှင်းပြထားတာကတော့ baking terms အရဆိုရင်adash ဟာ 1/8 teaspoon လက်ဖက်ရည်ဇွန်းရဲ့ရှစ်ပုံတစ်ပုံလို့ဆိုပါတယ်။
Pinch ဆိုတာ လက်မနဲ့လက်ညှိုးသုံးပြီးဆွဲလိမ်၊ ဆွဲဆိတ်တာပါ။ ဒီတော့ ခြောက်သွေ့တဲ့အမှုန့်တွေနဲ့ သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ လက်ညှိုးနဲ့လက်မကြားမှာပါသလောက်ပမာဏပေါ့။ take something withapinch of salt ဆိုတဲ့အသုံးတစ်ခုရှိတယ်။ သံသယနဲ့နားထောင်၊ ချင့်ယုံလို့ဆိုချင်တာပါ။ You have to take everything she says withapinch of salt.
Shake well = နာနာလှုပ်ခါပါ။
Then put some ice cubes intoasalt-rimmed glass. ပြီးရင် နှုတ်ခမ်းသားကိုဆားလူးထားတဲ့ဖန်ခွက်ထဲကိုရေခဲတုံးတွေထည့်ပါ။
Garnish withaslice of lime. သံပုရာသီးတစ်စိတ်နဲ့အလှဆင်ပါ။
bar spoon = ဘားမှာသုံးသည့်ဇွန်း၊ (အရိုးရှည်သည်။ အရည်များမွှေရာမှာသုံးသည်။)
caster sugar = အလွန်နူးညံ့ကာအပွင့်မှုန်သည့်သကြား (အမေရိကန်တွင် superfine sugar ဟုခေါ်သည်)
cherry = ချယ်ရီသီး
chill = အအေးခံသည်
cocktail glass = ကောက်တေးဖန်ခွက်
fresh = လတ်ဆတ်သော
half = တစ်ဝက်
quarter = လေးပုံတစ်ပုံ
liquid = အရည်
mix = ရောစပ်သည်
olive = သံလွင်သီး
squeeze = ညှစ်သည်။
stir = မွှေသည်။ ခလောက်သည်။
triple sec = လိမ္မော်သီးအချို၊ အခါး တို့၏အခွံခြောက်မှပြုလုပ်ထားသောအရက်ချို
ညွှန်ကြားချက်တွေကို verb ရဲ့base form နဲ့စပြီးပြောလေ့ရှိပါတယ်။ ၀ါကျတိုင်းမှာ subject ရှိရမယ်လို့လေ့လာထားခဲ့တာမှာဒီလို imperative sentence တွေမှာ subject ကိုဖျောက်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခိုင်းတဲ့သူကကိုယ့်ကိုပြောတာမှန်းသိနေတဲ့ အတွက်ကြောင့်ထည့်မပြောတာပါ။
instruction မှာ sequence marker တွေဖြစ်တဲ့ first, next, then, finally တွေနဲ့ဘာပြီးရင်ဘာဆိုတာ အစီအစဉ်ကျအောင်တွဲသုံးတဲ့အခါ နားထောင်ရတာ ထောက်မနေတော့ ဘူးပေါ့။ အောက်ပါဥပမာကိုလေ့လာကြည့်ပါ။
To makeaBloody Mary, first, takeaglass. Next, add some ice. Pour in two measures of vodka. Then fill the glass with tomato juice. Then addadash of Worcester sauce, and Tabasco sauce. To makeaBloody Mary, first, takeaglass. Next, add some ice. Pour in two measures of vodka. Then fill the glass with tomato juice. Then addadash of Worcester sauce, and Tabasco sauce. Finally, stir withabar spoon and garnish withaslice of lemon.
၁။ အောက်ပါတို့ကို sequence markers များသုံး၍ညွှန်ကြားချက်ရေးပါ။
1. Makeacafetière of coffee:
3. Registeraguest:
1. Mix/Squeeze the liquids withabar spoon.
2. Stir/Squeeze some fresh lemon juice.
3. Shake/Strain the liquid intoaglass.
4. Fill/Shake the cocktail shaker with crushed ice.
5. Add/Serve 1 1/2 measures of tequila.
6. Squeeze/pour the cocktail intoaglass.
7. Serve/Chill withastraw.
8. Strain/Stir withabar spoon.
9. Shake/Pour well to chill the liquids.
10. Stir/Garnish with cherry.
၃။ အောက်ပါပုံကိုကြည့်၍ Daiquiri cocktail ဖော်စပ်ရန်ညွှန်ကြားချက်ရေးပါ။
Permalink Reply by Noreen on November 12, 2012 at 16:00
Thanksalot Ko Zarni